KDE, Gnome, Xfce, LXDE ary ny hevitro momba azy ireo. | Avy amin'ny Linux
KDE, Gnome, Xfce, LXDE ary ny hevitro momba azy ireo.
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux, hafa
Ny solosaina finday, toy ny fizarana, dia mahatanteraka ny tanjon'izy ireo arakaraka ny filànay fototra sy ny fampiasana omentsika ny solosaina, ary amin'izao fotoana izao, mino aho fa (Na ny maro an'isa) fantatsika izay azon'ny tsirairay omena azy ireo.
Handray fotoana aho. Izaho, mpampiasa izay nanandrana saika ny birao rehetra misy GNU / Linux, Heveriko fa misy 4 lehibe na manan-danja indrindra amin'izao fotoana izao, ary hofaritako toy izao ny tsirairay amin'izy ireo:
1 KDE: Ny birao feno sy mamokatra indrindra ho an'ny GNU / Linux.
2 Gnome: Ny mpanjaka tsy manana seza fiandrianana.
3 Xfce: Ny safidy hafa amin'ny Gnome 2
4 LXDE: Ny kely indrindra, haingana indrindra nefa tsy matanjaka indrindra ao an-dakilasy
KDE: Ny birao feno sy mamokatra indrindra ho an'ny GNU / Linux.
Manomboka amin'ny teboka milaza fa ny "tsara indrindra" dia miankina amin'ny tsirony sy ny filan'ny tsirairay avy, tsy miafina na iza na iza amin'ny fisondrotana sy ny fadiny KDE dia nitana toerana manokana teo amin'ireo mpampiasa an'i GNU / Linux.
Miaraka amin'ny fialan'ny KDE 4 nanjary ratsy tarehy ny zava-drehetra, ary niaraka tamin'ny fanjavonan'i KDE 3.5, Izaho, toy ny maro, dia nihazakazaka nankany GNOME. Ary miaiky aho fa nahatsapa fahabangana foana.
Inona no ataony amin'ny KDE ka feno dia mihoatra ny hita maso fotsiny. Ohatra, zavatra notsikeraiko hatrizay dia ny habetsaky ny safidy ao anatiny, na ny birao sy ny fampiharana azy. Fa aza mihaino ahy, lavitra ny manimba izany satria iray amin'ireo teboka manohana ny latabatra alemanina io.
Ny olana angamba dia ho an'ny sasany, ireo safidy rehetra ireo dia tsy hita amin'ny toerana mety ary izany dia mahatonga ny mpampiasa maro hahatsapa ho tototry ny fahafaha-manao betsaka, izay averiko ihany, mitondra tombony fotsiny.
Miaraka amin'ny KDE ianao dia mahatsapa fa ny fampiharana tsirairay dia manana izay ilainao ary kely kokoa aza. KDE Nihatsara be teo amin'ny lafiny fahombiazana sy ny fahombiazany, ary tsy namela ireo drafitra nahazatra antsika, nahavita nanisy fomba vaovao amin'ny fampiasana ny birao. Ohatra iray amin'izany ny ranon-dra ary ny fiaraha-mientana, fitaovana azo ampiasaina amin'ny fomba tsara indrindra araka ny tranga misy, ary maro amintsika no mbola tsy mahatakatra.
KDE dia birao iray natao ho an'ireo mpampiasa rehetra izay vonona ny hiharan-doza amin'ny fanjifana kely, fa izay miverina dia hahazo tombony amin'ny famokarana bebe kokoa sy ny fahombiazany amin'ny asany isan'andro amin'ny solosaina. Ho ahy, ny tontolon'ny Desktop dia mihoatra ny fananana tontonana (na roa), menio, fantsom-pifandraisana ... sns. Ny tontolon'ny Desktop dia fitaovana sy rindranasa rehetra mamela antsika hiasa am-pilaminana miaraka amin'ireo rakitra sy lahatahiry, ary amin'izany KDE mandray ny felatanana.
Inona no tena ampiasaintsika rehefa miasa amin'ny solosaina? Heveriko fa ny 98% amin'ireo mpamaky an'ity bilaogy ity dia hanaiky ahy fa ny File and Folder Manager izany. KDE Manana an'ity fampiharana ity izay tsy mila fampisehoana sy izay toetra sy safidy sisa tavela: Dolphin. Raha tsy afaka mamokatra amin'ny Dolphin, dia tsy hiaraka amin'ny rakitra hafa sy ny mpitantana fisie, tsotra io.
Dolphin manolotra takelaka, takelaka fanampiny, terminal mifangaro, motera fikarohana, sivana fikarohana, ary tombontsoa hafa izay mahatonga anao hanana fifehezana feno amin'ny antontan-taratasy, rakitra na lahatahiry.
fa KDE lasa lavitra kokoa aza. KDE manolotra antsika fampidirana feno sy tanteraka eo amin'ny singa tsirairay ao aminy. Na dia tsy ampiasaiko manokana aza izy ireo, ny atambatra Akonadi / Nepomuk / Virtuoso manome anao hery tsy manam-paharoa izy ireo rehefa ampiasaina tsara. Raha mila manao zavatra ianao dia mahalana no tsy hitanao KDE ny fampiharana mety ho azy.
Ny tolo-kevitro: KDE Natao ho an'ireo mpampiasa izay te hanana ny zava-drehetra eny an-tànana, ho mahomby, mamokatra ary mitahiry fotoana betsaka araka izay tratra. Tontolo iainana mety indrindra ho an'ireo mpampiasa mikirakira fampahalalana marobe, mpamorona, mpamorona na te hanana safidy amin'ny zava-drehetra ary manamboatra ny birao amin'ny fomba mora indrindra.
Gnome: Ny mpanjaka tsy manana seza fiandrianana.
GNOME Tsy isalasalana fa nandritra ny fotoana ela dia ny mpanjakan'ny Desktop Environments raha ny fijeriko azy. Miaraka amin'ny fialan'ny KDE4, ny fiakaran'ny Ubuntu, ary ny fahatsorana izay mampiavaka azy hatrany, tsikelikely dia nanjary tian'ny mpampiasa maro eraky ny planeta tamin'ny famoahana an'i GNOME2, izay mora ny zava-drehetra, ary ny fidirana amin'ireo rindranasa ary koa ny safidin'ny Desktop dia tratra tamin'ny tsindry vitsivitsy.
GNOME2 Izy io dia tontolon'ny Desktop izay ahafahana miasa bebe kokoa ary avy amin'izany no ahazoana tombony tsara kokoa. Na izany aza, niditra an-tsehatra ireo mpamorona ny tetikasa GNOME3, tontolon'ny Desktop misy tranomboky nohatsaraina, saingy naneho fiovana tampoka (lehibe kokoa noho io naterak'i KDE4) ho an'ny mpampiasa ny GNOME2, izay niainga tany amin'ny fandravana ary nitady safidy hafa toa ny Xfce, LXDE na manana KDE.
Tsy afaka milaza izany GNOME miaraka aminy Shell ho fampiharana ratsy lavitra azy. GNOME3 Mbola matanjaka be izy io ary manana fitaovana tena tsara, na dia maro aza ireo mpampiasa mahazo aina amin'ny vaovao, saingy ny filôzôfia momba ny asa nanasongadina ity latabatra ity dia niova tanteraka ary ny endriny, mino aho fa tsy mifantoka amin'ilay mpampiasa farany mahazatra.
Na inona na inona tanjon'ny mpamolavola azy, dia hitantsika ato amin'ity bilaogy ity ny fanovana natao tamin'ity birao ity, raha ny fahitako azy dia tsy mahomby mihitsy GNOME miezaka ny hiditra amin'ny tsena izay tsy fananany tany velively, ary izay misy alternatives hafa mandroso kokoa. Ny ho avin'ny GNOME dia ao GNOMEOS, tetikasa iray izay tsy sahiko lazaina, satria kely dia kely ny zavatra fantatra momba azy.
Saingy tsy ny zava-drehetra no ratsy, araka ny nolazaiko, GNOME Izy io dia manana rindrambaiko tena tsara, mora be ny manamboatra azy, amin'ny tranga sasany tsy ampy amin'ny safidy raha oharina amin'ireo ananany KDE, fa matanjaka sy miasa ihany.
GNOME Izy io koa dia ampiasaina ho toy ny fototry ny hafa akorandriaka tena mahaliana toa azy ireo Unity y kanelina. Ny rakitrao sy ny mpitantana ny fisie (Nautilus), na dia tsy manana ny toetra rehetra an'ny DolphinIzy io koa dia mamokatra ary tena tsotra raha oharina amin'ilay voalaza teo aloha. Mivoatra amin'ny gtk, Manana fonosana manokana sy antoko fahatelo izy, saingy indrisy fa tsy nahazo laza intsony ilay Mpanjaka.
Ny tolo-kevitro: GNOME Ho an'ireo mpampiasa izay manintona ny fanamby vaovao sy ny interface vaovao izay kendrena indrindra amin'ny teknolojia mikasika, izay tsy mampaninona anao ny mampiasa ny fitendry ary mandany vola kely. Mety raha mampiasa akorandriaka hafa toa ianao kanelina o Unity.
Xfce: Ny safidy hafa amin'ny Gnome 2
Xfce tonga hameno ny banga tavela amin'ny maro GNOME2. Birao iray izay efa taona vitsivitsy ary nivoatra tsikelikely, izay ny fivoarany miadana dia vokatry ny programa kely ananany. Zavatra saika mifanohitra amin'izay raha heverintsika izany Xfce nanjary nalaza tato ho ato.
Xfce efa a GNOME tsy dia misy fampiasa intsony. Ny fisehoany dia mitovy amin'ny ankapobeny ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny maha-tsotra, haingana, mora amboarina ary rehefa natao manokana, tena tsara tarehy. Saingy satria tsy mety tsara ny zava-drehetra, tsy ampy zavatra maro izy io, tsotra be ny fampiharana azy ary tsy manana fitaovana tsara hitantanana ilay rafitra.
Mazava ho azy, miorina amin'ny gtk, azonao atao tsara ny mampiasa ny fampiharana ny GNOME, fa farafaharatsiny tiako ho manana fitaovana bebe kokoa izy.
Iray amin'ireo teboka malemy amin'ny Xfce Izy io dia ny mpitantana ny rakitra sy ny fampirimana marina: Thunar. Eo ambanin'ny fialan-tsiny fa ho very fahazavana izy io, tsy sahy mampiditra tabilao na takelaka fanampiny ireo mpandraharaha, noho izany ny fiasa miaraka amin'ity fampiharana ity dia mampihena ny famokarana betsaka.
Ho an'ny ambiny, ny zavatra rehetra dia tena tsotra ary azo alamina Xfce tanteraka (na amin'ny ampahany) avy amin'ny ivon-toeranao Configuration. Ny Version 4.10 dia nanampy fanatsarana betsaka ho an'ny mpampiasa ary mahaliana ny mahita ny hoavin'ity tontolo Desktop ity amin'izao fotoana izao Debian dia nandray azy io ho toy ny birao misy anao.
Ny tolo-kevitro: Xfce Ho an'ireo mpampiasa izay tsy mila manao asa mandroso miaraka amin'ny rafitra, izay tia Desktop tsotra, ary te hanana fidirana amin'ireo rindranasa rehetra ananany amin'ny tsindry vitsivitsy monja. Mety tsara ho an'ny mpanoratra, mpanao gazety ary olona mampiasa ny solosaina amin'ny zavatra fototra izy io, manome fifandanjana eo amin'ny herinaratra sy ny hafainganana.
LXDE: Ny kely indrindra, haingana indrindra nefa tsy matanjaka indrindra ao an-dakilasy
LXDE no kely indrindra amin'ny tontolo Desktop mandroso amin'ny gtk, no haingana indrindra ary, noho izany, ilay tsy ampy fampiharana azy manokana, toy izany Xfce, mila mampiasa fitaovana maro ianao avy amin'ny GNOME mba hamita ny isan-karazany ny fahafaha-manao.
Ny fisehoany amin'ny alàlan'ny default dia mampahatsiahy antsika ny Windows XP ary miaraka amina asa kely dia azonao atao ny manamboatra azy io, na izany aza, teboka iray manohana ity Desktop Environment ity dia ny File and Folder Manager: PCManFM.
PCManFM Izy io dia manana toetra sasany an'ny zokiny lahy toa ny volomaso, izay ampiarahina amin'ny hafainganana sy ny hatsarany, mahatonga azy io ho safidy tsara indrindra Thunar, izay mihoatra lavitra noho ny famokarana, ny fanaingoana ary ny fanaingoana azy.
Ny tolo-kevitro: LXDE Mety ho an'ny ekipa tsy dia mahomby izy io noho ny fandanjana atolotray antsika eo anelanelan'ny hafainganam-pandeha sy ny fahatsorana. Natolotra ho an'ireo mpampiasa manana traikefa kely kokoa, satria tsy dia akaiky loatra ny zava-drehetra.
Nolazaiko tany am-piandohana ary averiko indray: Ny birao tsirairay dia feno na tsia mifanaraka amin'ny filan'ny tsirairay. Iray amin'ireo karazany telo ireo (manintona Akorandriaka gnome)Vonona ary vonona hampiasa, afaka mora ampiasaina amin'ny mpampiasa vaovao izy ireo.
Ity lahatsoratra ity dia tsy inona fa famerenana ivelany fotsiny sy tsy mitanila ny tsirairay amin'ireo tontolo Desktop ireo. Ny mpampiasa tsirairay dia mahalala izay azon'izy ireo ampanjifaina, amboarina ary hararaotina ny safidin'ny tsirairay amin'izy ireo, mazava ho azy, tsy azoko lazaina eto.
Samy mahay amin'ny zavatra ataony izy rehetra, ary samy mamaly ny filan'ny mpampiasa isan-karazany ny tsirairay avy. Raha manontany ahy ianao dia hijanona miaraka amiko KDE y Xfce, miankina amin'ny zavatra tokony hataonao. Iza no tianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » KDE, Gnome, Xfce, LXDE ary ny hevitro momba azy ireo.
148 hevitra, avelao ny anao
Ny marina dia tiako Xfce, LXDE ary KDE, tsara izy ireo raha miankina amin'ny fitaovana ny iray na ny hafa satria amin'ny 3 rehetra dia afaka manao zavatra mitovy aho fa tsy mitovy fomba. Xp
Makubex Uchiha (azavenom) dia hoy izy:
izany info tsara namana xD ho ahy tiako kde na dia amin'ny tenany aza mavesatra izany nefa tsy miraharaha aho: 3 hatsarana izany rehefa vitanao ny manamboatra azy araka izay tadiavinao xD eto avelako ianao rehefa navelako ny kde sarobidy:
ary yapa 😛 Avelako ity fampianarana nataoko tao amin'ny bilaogiko ity mba hanitsiana azy ary hamelako azy folo 😛
Mamaly an'i Makubex Uchiha (azavenom)
Manome ahy izany lesoka izany aho:
Efa fantatro omaly fa tsy ara-drariny nampiato ny bilaogiko ny mpampiantrano noho ny zava-misy tsotra hoe nahatratra efa ho 3000 ny fitsidihana tao anatin'ny efa-bolana izay nitondrako azy, ary milaza aho efa ho 4 satria tena kely sisa tavela hahatongavana tany ary izany no mitranga amiko toa izany Tsy nisy izany raha tsy nampitandrina ahy teo aloha ary izany no antony namoizako ny zavatra rehetra nilaiko natao 🙁
Fantatro fa raha vao nanandrana ny KDE i @elav dia hijanona miaraka amin'ny hahaha izy. Nihatsara be ireo KDE tamin'ireto kinova farany ireto ary amin'ity kinova ity dia hifantoka amin'ny fanitsiana ny bibikely sy ny fihemorana izy ireo, fanapahan-kevitra tena tsara nataon'ireo mpamorona ny "misintona a miova "
Ny GNOME2 dia ho ahy izay sahaza indrindra sy azo alain-tahaka ary haingana indrindra amin'ny solosaina lehibe indrindra. Mampalahelo fa niova ny filozofiany. Izany no mahatonga ahy hifikitra amin'ny Debian Squeeze mandra-pahatapitry ny fanohanana azy, avy eo hieritreritra ny hifindra amin'ny openbox aho, iza no mahalala xfce.
Manana KDE sy Xfce ao amin'ny netbook of work aho izao. Tokony hiaiky aho fa tato ho ato dia nampiasa KDE bebe kokoa aho… 😕
Ny KDE dia zavatra hafa. Mampiasa KDE sy Xfce koa aho saingy tsy maintsy miaiky aho fa miaraka amin'ny KDE dia tonga izy io ary ampiasaina, vonona ny zava-drehetra ka tsy mila manao na mahafantatra na inona na inona ny mpampiasa, tonga lafatra amin'ny fiasana ary tsy mandany fotoana handaminana zavatra.
Amin'izao fotoana izao dia manoratra aminao avy any Xfce aho ary ny tena marina dia mila manararaotra fotoana tsara ianao hanaovana azy "vonona" satria raha tsy izany dia mahatsiravina, raha ny tena izy dia mandany fotoana bebe kokoa amin'ny fanamboarana sy ny fandefasana azy mihoatra ny miasa xDD
Eny, mazava ho azy, fa mba ho hitanao fotsiny, Tuning Xfce ho ahy dia mora kokoa noho ny amin'ny KDE. Ho fanampin'izay, manana lohahevitra sy safidy maro hafa ny Gtk, mila mampitaha ny fijery gnome amin'ny kde-look fotsiny ianao ..
Sys dia hoy izy:
> lohahevitra maro hafa
Izany ve ilay lohahevitra miaraka amin'ny KDE (sy Obsidian) tena tsara tarehy 🙂
Valiny tamin'i Sys
Sir dia hoy izy:
Salama fanontaniana iray. Andao hadino ny momba ny fandefasana, ny tahotra tsy misy, ny loko, ny firavaka sns. Ny rafitra sy ny rindranasa miasa fotsiny no hifantohantsika, tsy misy "pop" satria, ohatra, ny loko na ny fiatraikany amin'ny varavarankely dia tsy hahatonga ilay programa noforoniko na zavatra hadiniko momba ilay ny taratra habetsahan'ny habakabaka dia mamaha ny tenany ho ahy (izany no ilazako ilay "pijadas" tsy dia ilaina). Nampiasa linux nandritra ny taona vitsivitsy ianao (Ubuntu, Opensuse, Fedora, Scientific Linux ao amin'ny Gnome, KDE ary Xfce) ary nanova ny fizarana ireo zavatra momba ny fitaovana ary tato ho ato satria tsy afaka mametraka isaky ny volana vitsivitsy aho, mila taona aho satria ny andrana no maharitra amiko, ary asa, fikarohana. Tsy misy lalao marcinanito, tsy misy zavatra hafahafa, angamba horonan-tsary sy mozika mp3 vitsivitsy ary amin'ny solosainako manokana ihany. Saingy mazava ho azy, tsy tiako ny fizarana sy tontolo iainana isan-karazany amin'ny solosaina tsirairay, raha toa ka misy solosaina 5 mitovy amin'ny an'ny kojakoja manokana. Tena sarobidy ny fotoana ary tsy afaka miaraka amina fomba amam-panao na fahazarana samihafa amin'ny solosaina iray mankany amin'ny iray hafa aho, amin'ny alàlan'ny fampiasana programa amin'ny tontolo iray ary avy eo hafa amin'ny tontolo hafa misy safidy, tabilao sns. Azonao tsara ny tiako holazaina, na dia azo antoka aza fa hisy hilaza fa ny fampiharana mitovy dia azo ampiasaina amin'ny birao samihafa. Saingy tsy izany no izy.
Ka nisafidy ny Scientific aho fa ny KDE entiny dia somary antitra, na dia faran'izay kely indrindra aza, dia mandeha izy ary io no ikarakarako azy, saingy ity tontolo ity dia somary faharoa ihany ary tsy omen'izy ireo ny lanjany ilaina ny fametrahana azy tsara sy ny famitana azy. Farafaharatsiny mba tsy nahitako azy toy ny tamin'ny Fedora KDE hatramin'ny Spin. Amin'ny Scientific, toy ny ao amin'ny Centos mieritreritra aho, mila manafoana tanana ny fampiharana gnome be dia be ianao, raha fantatrao izy ireo hahafantatra azy ireo hafa, mba hamelana KDE madio. Fa ny nolazaiko dia tsy nahatanteraka an'io aho ary tsy fantatro raha diso aho na tsy manome bebe kokoa ny fizarana.
Ka androany dia ao an-tsaiko miaraka amin'i Kde sy Xfce ny Slackware. Iza amin'ireo no hofidinao? Mieritreritra aho fa manana milina taloha aho izay ho tsara ho an'i Kde, na dia miaraka amin'ny SL aza dia nandeha tsara ary niaraka tamin'ny Xubuntu farany tsara kokoa. Tsy mankany amiko i Xubuntu, tsy misy na inona na inona Ubuntu, izany no tsy itenenako lainga. Ka safidy iray ihany no Kde amin'ny rehetra fa ilay taloha misy XFCE, fa… .. Mikasika ny kofehin'ny fanoloran-tenanao momba ny KDE ho an'ny tontolo mahavokatra, hamporisihinao ahy ho ahy koa ve izany satria ny tenako ihany no nanokanako tena hanao fikarohana tany amin'ny oniversite?
Tokony holazaiko fa ny SL miaraka amin'i Gnome no tsara indrindra, irariana fa niasa tsara tamin'ny KDE io, saingy efa nilaza aho fa tsy nahomby. Raha misy manana tolo-kevitra hametraka ny KDE amin'ny SL na Centos manana fahadiovana mitovy amin'ny fihodinan'ny Fedora KDE dia tiako izany. Somary mahafaty ny lohahevitry ny codec multimedia sy ny zavatra ao amin'ny SL KDE.
Zavatra iray hafa momba ny KDE sy ny tolo-kevitrao. Mampiasa USB drive matetika aho ary tena ilaina izany. Ary ao amin'ny Gnome dia alaina madio izy ireo, fa tsy amin'ny KDE miaraka amin'ny feso, azonao atao ny manala azy ireo, eny, fa omena sakafo foana izy ireo ary amin'ny farany dia mila misintona azy ireo amin'ny fikolokoloana ny nifinao ianao ... indray andro any dia ho tapaka ny kapila, azo antoka! Manana vahaolana amin'ny KDE ve ianao? Zava-dehibe izany satria noho izany fotsiny no nampiasako ny SL Gnome.
Tsapako fa tamin'ny farany dia tsy fanontaniana izany. Ary farany, rehefa dinihina ny asako, mamporisika ny SL ve ianao na Slackware?
Miarahaba anao, ary fantatrao fa noho ny olona toa anao, maro amintsika no nandao Windows.
Mazava fa teknika be io ary vitsy ny injeniera na siantifika eto. Misaotra ihany satria misy zavatra soratanao manampy betsaka. Novakiako saika isan'andro.
Ie, manomboka mino aho fa eny hahaha
Ie !!! \_ (ツ) / fa samy tafita soa aman-tsara ny rehetra.
Aleoko ny LXDE ary ilay an'ny "tsy dia matanjaka" dia amin'ny fomba somary henjana ho an'ny tontolo iainana izay manana ny fiheverako maotina ho iray amin'ireo mpikirakira rakitra maivana indrindra hitako, toy ny PCManFM, saingy hey. Tany am-piandohana dia nampiasa Gnome aho ary nampiasako izany rehefa niakatra ho any Gnome 2 fa izaho dia iray tamin'ireo voalohany nianjera tamin'ny Gnome 3 ary tena ny Shell-dry zareo na izay nolazain'i Gnome 3 tamiko fa tonga ny fotoana hikarohana faravodilanitra vaovao mandra-pahatongako mankanesa any LXde ary faly aho mahita fa amin'ny zavatra sasany dia haingana kokoa noho ny XFCE izany saingy fantatro fa ny XFCE dia mikapoka azy ao amin'ny Robustness satria na dia vitsy aza ny mpamorona (azoko antoka fa lehibe kokoa noho ny LXDE ny vondrom-piarahamonina XFCE) fa hey … Adala rehetra amin'ny foto-keviny.
Toa tsy dia matanjaka loatra izany amiko, satria miaraka aminy ianao dia afaka manao zavatra mitovy amin'ny tontolo iainana hafa, ary amin'ny fihinanana ambany kokoa, ohatra izany no antony itiavako an'i Lubuntu, manana lohahevitra tsara tarehy io ary mandany kely.
Na izany na tsy izany, hiteny aho fa tsy dia mailaka loatra ho an'ireo mpampiasa voalohany izany raha oharina amin'ireo tontolo hafa, indrindra eo amin'ny lafiny fandaminana ny LXDE, izay somary mikimpy kely ...
Eny, mazava ho azy fa afaka manao zavatra mahazatra amin'ny tontolo hafa ianao, saingy asa tsotra sy tena tsotra izy ireo.
Andao jerena, hataoko tsotra ho anao izy io. Rehefa miresaka mahery aho dia ataoko miankina amin'ny fotodrafitrasa famokarana omen'ilay fitaovana, ohatra, valio ireto fanontaniana tsotra ireto:
- Manana bara fanivanana atiny ve ny PCManFM?
- Manana motera fikarohana ao anatiny ve ny PCManFM?
- Manana terminal efa voaorina ve ny PCManFM?
- Manana takelaka ve ny PCManFM?
- Manana safidy ve ny PCManFM haneho vondron'ireo lahatahiry?
- Manana safidy ve ny PCManFM hampitaha ireo rakitra?
Tsy mila mamaly ahy tokoa ianao satria fantatro ny valiny. Izaho manokana dia tsy maintsy miaiky fa na dia tiako be aza ny Xfce, dia tsy hanana antsasaky ny safidy ananan'i KDE, izay miaraka amin'ireo fitaovany no mahatonga azy ho Desktop mamokatra sy matanjaka indrindra misy.
Ho an'ireo manam-pahaizana, mampitaha ny krunner amin'ny "hazakazaka" an'i Gnome fotsiny. 😀
Saingy ny famokarana dia mifanaraka amin'ny hevitrao momba ny famokarana, izay tsy midika hoe diso ianao, fa ho ahy zavatra mamokatra dia fampiharana ahafahako manao hetsika iray haingana sy mora, ho anao PCManFM dia manana bara fanivanana ny atiny na ny fikarohana na ny terminal dia fiasa, ho ahy izy ireo dia fanampiny, asa izay ataon'ny programa hafa natokana ho azy ireo, toy ny terminal, na boaty fikarohana (izay marina fa zavatra tsy ampy an'ny LXDE amin'ny alàlan'ny default. fotoana) na ny sivana, ankoatr'izay, ireo zavatra azonao ampiana amin'ny tsindry roa, na hoe araka ny nolazaiko dia mahavita programa hafa noforonina ho azy.
Ohatra, maninona ianao no manitsy sary avy amin'ny Word, afaka manova azy amin'ny Photoshop, izay noforonina ho azy?
Ankoatr'izay, LXDE dia noforonina nitady birao maivana sy tsotra, izay mitovy amin'ny fiasa kely kokoa na fiasana tsy dia feno na fohy, koa raha misy olona te hamokatra, dia tsy mifidy LXDE izy ireo satria tsy noforonina noho izany.
Ankoatr'izay, raha te hahomby amin'ny asa amin'ny orinasa ianao dia azo inoana fa tsy maintsy mampiasa Windows miaraka amin'ireo programa sy suite ao amin'ny biraony, ary koa programa hafa noforonina ho an'ity hetsika na asa na asa ity, raha tsy mila mampiasa Windows ianao any am-piasana. GNU / Linux.
Ny LXDE dia tsy dia matanjaka loatra, izy io, farafaharatsiny, tsy mamokatra kokoa noho ny tontolon'ny birao hafa, saingy mieritreritra aho fa ny herinaratra dia tsy mifamatotra amin'ny ambaratongam-pamokarana fotsiny, fa amin'ny zavatra maro kokoa, toy ny fampiasana, ny fahazoana miditra, ny lafiny fahitana .. .
Saingy ny famokarana dia mifanaraka amin'ny hevitrao momba ny famokarana, izay tsy midika hoe diso ianao, fa ho ahy zavatra mamokatra dia fampiharana ahafahako manao hetsika haingana sy mora, ho anao PCManFM dia manana bara fanivanana miasa ny atiny na ny fikarohana na ny terminal
Marina indrindra, ireo fiasa izay mahatonga ny fiasa miaraka amin'ireo rakitra, arisiva, lahatahiry ho mora kokoa. Andao lazaina fa manokatra PCManFM ianao, mankany amin'ny fampirimana misy rakitra PDF an'arivony, manomboka manoratra ny anarany ianao ary ny zavatra soratanao dia mifanentana amin'ilay anarana voalohany. Miaraka amin'ny sivana Dolphin, rehefa manoratra ianao, dia manjavona ireo ambiny antontan-taratasy, ary ireo fifanandrifian-javatra sisa no tavela ... Inona araka ny hevitrao no haingana sy mahomby kokoa?
Tsy miombon-kevitra aminao mihitsy aho momba ny Windows = Famokarana. Hanombohana azy, maharikoriko i Windows Explorer, korontana, aseho amin'ny fomba mahasosotra ny singa rehetra, tsy dia mora vahana, tsy manana kiheba na takelaka fanampiny. Mora kokoa ny mampiasa PCManFM na Thunar noho ny Windows Explorer, hanome ohatra anao.
Andeha hojerentsika, raha ny ampahan'ny fehintsoratra fotsiny no raisinao, na tsy misy dikany izany, na mifanojo amin'izay eritreretinao, fa ny ampahany hafa kosa no tena fototry ny hevitrao, asa izy ireo, eny, saingy asa fanampiny, tsy zavatra tsy maintsy ataoko izany. Ny fananana PCManFM dia tsy maintsy manana eny na eny, raha ireo fiasa nolazainao ireo ireo dia manampy anao hahomby kokoa, tena tsara fa raha fantatra fa misy fiatraikany amin'ny fampisehoana izany, ary ny LXDE dia tokony ho maivana sy tsotra, tsy mamokatra, na tsia Ary koa ny tontolo iainana hafa, imbetsaka dia misy programa tsotra, maivana ary mamokatra ary amin'ny fotoana hafa tsy misy, satria sarotra ny mahita fifandanjana tonga lafatra eo anelanelan'ny zavatra maivana (izay mazàna dia vitsy kokoa ny asany, ny safidiny na ny endriny) ary ny zavatra mamokatra.
Ary tsy nilaza koa aho fa ny Windows dia mitovy na ny tsara indrindra amin'ny famokarana, fa matetika izy io no be mpampiasa indrindra amin'ny orinasa miasa, izay tsy midika hoe ny be mpampiasa indrindra no mahomby indrindra.Raha marina ny anao, Windows Explorer Mitroka, fa io no be mpampiasa indrindra, izay tsy midika hoe izy no mamokatra indrindra.
Eny, mampiasa LXDE aho ary amin'ny maha-mpitantana rakitra ahy dia mampiasa Nautilus aho ka lasa ny zavatra PCmanFm, ary izaho manokana misafidy GNOME, ary tsy natao ho an'ny mpampiasa farany izany, lainga amin'ireo, ny tontolo iainana an'io mpampiasa io no ampiasaina. tsy te-hiditra amin'ny pimp amin'ny zava-drehetra ianao, tonga lafatra ho an'ny vaovao amin'ny Linux
Tena tiako ity lahatsoratra ity, ary mijery ny tranonkalanao raha mahita bibikely aho, tsy dia hitanao hoe iza ny mpanoratra, izany hoe ilay boaty kely kely amin'ny faran'ny tokony hitahirizanao azy, fa apetraho amin'ny toerana hafa izay nanoratra azy, I ohatra, apetraka eo akaikin'ny kaontera famakiana ihany koa.
Momba ilay lahatsoratra ihany, ny KDE no safidy tsara indrindra sy feno indrindra ankehitriny, na dia tiako ho fanatsarana ny sasany amin'ireo rindranasa KDE aza izany, tsy tiako na inona na inona, ohatra, ilay Dragon Player, na VLC, ary ny marina dia hitako fa misy safidy hafa. tsara tahaka ny mpilalao horonantsary any Qt, Bangarang dia tsy manintona ny saiko koa .. raha mahalala ny hafa ianao dia tiako izany.
Misaotra tamin'ny tolo-kevitra. Raha ny marina dia efa nieritreritra ny hametraka ny mpanoratra ho ambony izahay .. 😀
Momba ny KDE, tiako ny VLC misy azy, ary vao hitako i Bangarang ary tiako izany 😀
Andao hojerentsika, tsy hoe tsy tiako izy ireo, fa tsy izy ireo mpilalao horonantsary GNU / Linux izay tena tiako indrindra, heveriko fa nolazaiko taminao, tao Gnome, tiako Totem, izany no tokony ho mpilalao ho ahy, ny safidy mety sy ilaina, interface tsotra ... Mitady zavatra mitovy amin'ny KDE aho, samy be loatra ny entana, ary tsy tiako ilay Dragon Player.
Tsy mpilalao horonantsary ratsy i Bangarang, saingy mpilalao mahatsikaiky sy mpikarakara tranomboky mozika izy io, ary izany no antony tsy itiavako azy, mandefa programa duplicate aho, raha toa ka efa nanao ny anjara fitendrena mozika tena tsara i Amarok, maninona aho no mila mpilalao hafa Inona no mamerina azy ho ahy, fa inona no mandamina izany ho ahy tsy mety?
Amarok na Clementine ho an'ny mozika, ary raha VLC ho an'ny horonantsary, rehefa manohy ny fikarohana ireo mpilalao horonantsary mendrika sy tsotra ho an'ny KDE aho.
truko22 (@ truko222) dia hoy izy:
Andramo SMPlayer tiako be io ary nampiasa VLC aho tamin'ny fiainako rehetra.
Mamaly an'i truko22 (@ truko222)
Misaotra ihany koa ho an'ireo izay nametraka, na dia tsy tiako loatra aza ilay smplayer ho an'ny interface, dia toy ny VLC izy io, ratsy tarehy ary be loatra ny safidy.
Andramo SMPlayer 😉
Eny ary, andramako ihany koa 🙂
Azonao atao ny manandrana kafe, umplayer, kmplayer, playbak, bakaar, loopy, mpilalao horonantsary kde tsotra daholo izy rehetra.
Misaotra tamin'ilay lisitra, mampanantena aho fa hijery azy ireo foana 🙂
Miguel Angel Martinez dia hoy izy:
Eny, ny marina dia satria hitako SMPlayer dia tsy te hiverina any VLC aho.
Hanasongadiko ny fampidirany tanteraka amin'ny KDE, ny mpitantana dikanteny (misintona azy ireo mihitsy aza) izy ary mitohy ny famoahana horonantsary iray izay nijanonako (Tsy misy ao amin'ny VLC)
Valiny tamin'i Miguel Ángel Martínez
Saika tiako daholo ny olona ankoatra ny lxde.
Efa nanandrana kanelina aho, mampiasa firaisan-kina, mampiasa akorandriaka gnome, tiako izany fa tsy haiko ny manamboatra azy io mba hahatonga azy io ho tsara tarehy kokoa.
Etsy ankilany, ny KDE dia iray amin'ireo hitako ary tadidiko ny windows ary manome ahy fandavana kely, saingy tsy laviko fa maro ny birao desk hitako fa tsara tarehy, saingy tsy fantatro hoe ahoana no nahatratraran'izy ireo , fa ny olana dia ny fomba ahatongavany amin'ny toerana misy anao (chakra, sy distros livecd hafa miaraka amin'ny kde) tsy dia tiako loatra 🙁
Marina izany. Izany dia milaza aminao ny olona iray izay tsy tia ny endrika ivelany sy ny fahatsapana ny KDE amin'ny toerana misy anao, fa toa an'i Xfce, ny KDE dia azo namboarina araka izay itiavanao azy ary ataovy tahaka ny tontolon'ny birao rehetra izany.
Ny KDE sy Xfce no azo ahitsy indrindra .. 😀
rock and roll dia hoy izy:
Ary LXDE koa. Tsy dia manana fitaovana sary be dia be hanaovana azy io, saingy azo namboarina izy io, afaka ary be dia be izy io.
Saingy mandany asa bebe kokoa ianao, mieritreritra aho .. Misy zavatra tsy maintsy apetrakao amin'ny tanana ao amin'ny .gtkrc-2.0 na gtkrc.mine files ohatra.
Eny, marina fa ny fikirakirana ny rakitra an-tsoratra dia mila fotoana bebe kokoa noho ny raha vita amin'ny fitaovana sary. Ankehitriny, satria tsy iray amin'ireo te-hanana birao hafa isan-kerinandro aho, dia vita indray mandeha monja ny dingan'ny fikirakirana, amin'ny fotoana fametrahana azy. Avy eo, rehefa tiako izany dia hadinoko ny manamboatra ny birao (farafaharatsiny fanovana sary an-tsary).
Ankoatr'izay, rehefa tsikaritro ny fomba fiasan'ny LXDE haingana raha oharina amin'ny tontolo hafa dia tsy miala tsiny aho fa tsy maintsy nandalo fanamboarana somary sarotra kokoa, satria ny hakingan'ny tontolo iainana dia mandoa izay sakana hafa mety ananany ... ho ahy, mazava ho azy.
ao amin'ny sofina dia misy lahatsoratra iray handefasana kde tena tsara.
Ary ny rohy dia? Misaotra 😀
Marina fa ny KDE dia feno kokoa saingy noho izy io dia feno dia mavesatra ihany koa izy ireo na dia vitany aza ny manome maivana azy hatramin'ny version 4.0. Manantena aho fa izao miaraka amin'ny fividianana Digia avy any Qt ny làlan'ny KDE dia tazonina amin'ny làlana marina satria mampihomehy tokoa fa rehefa avy mandehandeha be dia tsy maintsy manomboka amin'ny rangotra raha sendra mandeha ratsy ny tompony. raha mila misafidy tontolo hafa ankoatran'ny LXDe aho dia hijanona ao XFCE fa araka ny nolazaiko… izany ny hevitro.
Raha fantatrao Amin'izao fotoana izao dia mampiasa ny KDE amin'ny netbook fiasako aho. Ary fantatrao inona? Mandany ahy saika mitovy ny KDE (indraindray kely kokoa, indraindray hafa kokoa) noho ny Xfce, ary betsaka kokoa noho ny Gnome ... Ahoana ny hevitrao?
Ry sakaiza, manaja ny hevitrao izahay, mazava ho azy fa izany no ilainay satria ny tsirony: Colour 😀
Mampiasa ny KDE sy ny XFCE aho, ny olako amin'ny KDE dia ny fitomboan'ny fanjifako CPU ary mihamangatsiaka ny sariko, amin'ny resaka fanjifana ny fahatsiarovan-tena dia tsy manana olana aho.
Andramo ny mampiasa ny rafitra mpanara-maso sy manafatra avy eo ambony ka hatrany ambany amin'ny CPU mba hahitana izay mandany be indrindra, azonao atao koa ny manandrana tsy mampandeha nepomuk na akonadi. Raha mihinana cpu kely kokoa dia azonao atao ny mandeha amin'ny fisehon'ny fampiharana, ny fombany, ny fanitsiana tsara ary amin'ny vokany sary dia mifidiana cpu kely. Indraindray mivaingana be izany amin'ny fampiasana ny tmb plasmoid an'ny antoko fahatelo.
Amin'ny alàlan'ny default, ny baiko dia alaina amin'ny fanjifana CPU.
Heveriko fa miankina betsaka amin'ny Hardware ampiasainao.
Manana mpikirakira AMD Athlon 64 × 2 Dual core 3800+ 2Ghz misy RAM 4Gb aho.
😮 matotra?, Inona ny netbook iainanao sy / na ny fanondroanao ?? ary inona distro tb ???
hijerena raha miasa amin'ny ahy io: p
Ity no netbook-ny: https://blog.desdelinux.net/unity-en-netbook-hp-mini/
Ary mampiasa Debian Testing (Wheezy ankehitriny) izy io.
HP Mini 110 misy RAM 1Gb .. 😀
Tena tiako ny LXDE, tsy dia mampino ireo loharanom-pahalalana vitsivitsy ary ho ahy dia manana fotodrafitrasa marobe izy io, F4 hidirana amin'ny terminal avy amin'ny fampirimana, tsoratadidy, amin'ny alàlan'ny fanoratana fotsiny dia afaka mitady ny rakitra ao anaty folder misy ahy aho, Sns
Mbola miaiky aho fa tsy natao ho an'ny mpampiasa vao manomboka izany ary mety tsy ny olon-drehetra no mety mankafy ny fahatsoran'ny LXDE.
tarantonium dia hoy izy:
Ho an'ireo izay tia solosaim-birao minimalist dia asehoko anao ny pikantsary ny KDE avy amin'ny mageia 1 rehefa nanana izany tamin'ny solosaiko aho:
Aza miteny amin'izay fa tsy afaka manana KDE mahafinaritra ianao.
Mamaly an'i tarantonio
Manararaotra ny fanehoan-kevitra teo aloha, ny soso-kevitra manetriketrika momba ny famolavolana tranonkala, izay tiako:
- hanafohezana url rehefa mamoaka, tsy izany no mitranga toy ny tamin'ny hevitro teo aloha izay mamela ny vatana
- ny mpanoratra ny lahatsoratra dia toa tsy tsara, tsara kokoa etsy ambony na misongadina bebe kokoa
Miarahaba anao amin'ny famolavolana vaovao, tsy dia misy azo hatsaraina, saika tonga lafatra.
Ny manafoana URL dia tena tsara, tsy maintsy jerenao raha alaintm (iza no mandahatra ny lohahevitra) manam-potoana hanaovana izany, satria fampiharana io fa tsy tao anaty drafitra ary misy zavatra hafa tokony hatao hahahaha.
Mampiasa ny KDE ao amin'ny Mageia 2 aho, tena faly amin'izany aho, na dia marina aza fa indraindray ny safidy maro be sy somary miparitaka dia mampifangaro azy, fa mifikitra fotsiny aho noho ny safidiny fikirakira.
Te-hamaky momba ny safidy hafa koa aho, amin'izao fotoana izao dia mieritreritra ny hampiditra ny Enlightenment aho, izay na dia tsy mandroso loatra aza ny fomba iray, tato ho ato dia miasa mafy be izy ireo, ary azo ovaina ihany koa (afa-tsy ny menio). Ary milaza ny tontolo hafa ianao, nandre momba ny Openbox sy ny derivatives aho, fa momba ireo dia tsy nahita zavatra maro tao aminy aho.
misaotra tamin'ny fampahalalana androany
Saika mila misaotra an'i Ubuntu aho tamin'ny fametrahana ny Unity ary nahatonga ahy hitady distro hafa, satria hatramin'ny nametrahako Xubuntu dia faly aho, toa hafa ny laptop-ko, mahafinaritra izy io. Ny hany maharatsy ny tsiroko dia ny fisehoan'ny tontonana lehibe tiako indrindra ny Gnome Classic tao Ubuntu. Ho an'ny ambiny, eny, mety tsy ampy kely i Thunar fa ho ahy dia manana be dia be aho.
Heveriko fa tsy misy matanjaka noho ny iray hafa, araka ny natoron'ny mpanoratra azy, resaka resaka tsiro sy tanjona, tanjona izany. Hisy foana ireo karazana ady hevitra ireo, tsy amin'ny tontolo desktop ihany, ny rafitra fandidiana, ny tantara, ny siligaoma, ny klavier, ny iPhones, ny PC, sns.
Ho ahy ny tena feno sy manintona indrindra dia ny KDE saingy tsy ampiasaiko izany satria safidy be dia be no mahatonga ahy ho manina.
Tiako ilay birao jiro sy amin'izay ilaiko atsy ankilany, izay ampiasako ny Xfce tiako.
Mampiasa ny Gnome 2 avy amin'ny SolusOs koa aho izao ary mizaha toetra ny xlde izay tsy ratsy velively, ary mifanaraka amin'izay ilaiko ihany koa.
Ny firaisana, kanelina ary Gnome raha ny hevitro dia tsy mandeha ary ho hitan'ny maso, alohan'ny hampiasako ny KDE ho an'ny miloko sy azo ampiharina kokoa, tsy izany no izy.
Homeko fanandramana hafa indray i KDE, namaky fanamarihana tsara betsaka tato ho ato aho.
Ho ahy, amin'izao fotoana izao dia miaraka amin'ny Mate sy Compiz aho ary faly amin'ny fiainana, toy ny hoe mbola miaraka amin'i Gnome2 ...
Lahatsoratra tsara, mifandanja tokoa, +1!
Mazava ho azy, avy eo dia tsy maintsy ho isan'ireo mpampiasa 2% sisa aho satria ho ahy ilay fampiharana manan-danja indrindra anio ary tsy isalasalana fa ilay ampiasako indrindra - ireo izay ampiasaiko indrindra, dia tokony holazaiko- ny browser: foana aho manana mpizaha iray na maromaro misokatra, izy ireo no ivon'ny fampiasako ilay masinina.
Eny eny, ny browser dia iray amin'ireo fampiharana ampiasaina indrindra, fa amin'ny farany ho an'ny zavatra rehetra tokony ho faty ao amin'ny File Manager 😀
Ny filaharan'ny safidiko:
- KDE (mpampiasa mandritra ny androm-piainany ary mpamorona).
- Firaisankina (manana foto-kevitra lehibe, saingy fampisehoana mahatsiravina).
- XFCE na LXDE (mitovy ambaratonga izy ireo, mpandala ny nentin-drazana loatra).
- Kanelina (mitovy taloha, tsy misy vaovao).
- Gnome (tsy azo ampiasaina).
@hipersayan_x Mivoatra ao amin'ny KDE ve ianao? Liana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fizarana ve ianao?
Ary ahoana ny hevitrao momba ny MATE DESKTOP ??? Tiako izy izany. Gnome 2 fork manantena fiainana lava. http://mate-desktop.org/
Amin'izao fotoana izao, ny KDE no biraonao tsara indrindra ho ahy, ny fivoarany dia niavaka tamin'ny fitoniana sy ny hafainganana, ary tena feno sy azo alamina. Izaho koa dia iray amin'ireo Gnome nitsoaka ny kinova ankehitriny, voalohany noho ny interface tsy mandeha amin'ny pc mahazatra, ny vitsivitsy (saika tsy misy) ny safidiny fikarakarana, ankoatr'izay ny ankabeazan'ireo lohahevitra dia tsy tiako, ary koa manampy ny olan'ny fanitarana izay lasa tsy mifanaraka amin'ny fandalinan'ny kinova, ankoatry ny fandaniana loharano betsaka kokoa noho ny KDE. XFCE sy MATE no nampiasaiko, saingy tsy dia naharesy lahatra ahy loatra izy ireo. Tsy ilaina koa ny mandà fa misy ny fampiharana Gnome tena tsara, raha ny amiko dia aleoko mampiasa ny rindrambaiko multimedia Gnome noho ny an'ny KDE. Ny olona rehetra ihany no mampiasa izay toa tsara indrindra aminy sy mifanaraka amin'ny filàny, ary ny ahy dia fenon'ny KDE ho tontolon'ny birao.
Tato ho ato dia mampiasa safidy roa hafa izay tsy voalaza eto aho, ny hareza-qt ary ny fanabeazana fototra (akorany pantheon). Hareza (izay tsy tontolon'ny birao) ampiasaiko ho karazana kde tsy misy kwin (openbox no ampiasaiko) ary tsy misy plasma. Tena mandeha tsara izy io (milamina kokoa noho ny plasma izy satria tsotra kokoa) ary kely ny laniny (mandany latsaky ny 250 MB izy miaraka amina fanombohana kde maromaro.
Pantheon dia akorandriaka gnome raha tsy diso aho, mampiasa gala ho mpitantana varavarankely izy, manao rakitra ho toy ny mpitety rakitra, manao zana-kazo sy programa maro hafa noforonin'ny ekipa fanabeazana fototra. Ho ahy dia tsara fotsiny izy io, ny toerana misy anao mampionona sy kanto indrindra hitako hatramin'izao ankoatry ny tsy mitombina (na dia alpha na beta aza), raha tsy manana safidy safidy manokana izy io.
Razor qt Notsapaiko ihany koa izany ary mila milaza aho fa mety ho fifaninanana lehibe ho an'ny LXDE. Tsy manana fitaovana sasantsasany (ohatra, ao amin'ny netbook dia tsy misy zavatra azo sary an-tsaina ny haavon'ny bateria, na farafaharatsiny tsy hitako), fa amin'ny ankapobeny dia toa manana ho avy izy io, na dia tato ho ato dia mbola tsy nahita aho vaovaon'ity tetikasa ity.
Mikasika ny pantheon, matetika tsy dia mazoto mampiasa Gnome Shells aho noho ny antony hafahafa, na izany aza, ny tetikasa fanabeazana fototra dia niahiahy foana momba ny fanomezana ambaratonga avo lenta amin'ny fampiharana azy, noho izany dia heveriko fa ny kinova azo antoka dia hanome be resaka. momba.
Mikasika ilay lahatsoratra dia nanandrana ny solosaim-birao nolazaiko aho ary mahaliana ahy izany fa ny Gnome 3 dia nahatonga Shells sy filozofia maro be nampiasaina mitovy fototra. Tsaroako izy ireo rehefa nanambara izy ireo fa ny kinova 2.30 dia ho ny kinova 3 (na dia 2.32 aza izany tamin'ny farany), dia nilaza izy ireo fa tsy dia hampivadi-po ilay fanovana, angamba raha ny momba izay nitranga tamin'i KDE tamin'izany fotoana izany.
Raha ny fahitako azy dia tsy tampoka ilay fanovana, fa somary nanelingelina, indrindra ny tsy fisian'ny fiasa sasany, na dia averiko aza, tsy nampiasaiko mavitrika izany ka tena azo iadian-kevitra ny hevitro.
Ary farany, ny famaliana ny fanontaniana ao amin'ny paositra, ny KDE no birao tiako indrindra, noho ny antony maro ary na dia misy zavatra tsy tiako aza (toy ny fihetsika fampandrenesana amin'ny toe-javatra sasany) dia misy foana ny mpisolo toerana na mpamorona hifampiresaka miaraka amin'i.
Miala tsiny Vicky, fa azonao atao ve ny maneho hevitra izay distro ampiasainao sy info momba ny fomba fametrahana Pantheon Shell?
Tsy ho an'ny tsy misy izany, efa ela aho no nampiasa ny Enlightenment (na E17) ary mety amiko izany. Tena azo alamina io, MIASA NY LALANA tadiaviko. Tena manaja ny XFCE aho, saingy haingana toy izany koa ny E17. Ny KDE dia manana rindranasa mahavariana, toy ny K3B matanjaka, nametraka azy ireo fotsiny aho ary miasa mahafinaritra amin'ny heriny lehibe nefa tsy very ny hafainganana ilaiko. Pcmanfm dia manome ahy izay ilaiko amin'ny maha mpitantana rakitra ahy ary avy any Gnome mankany Gimp sy programa hafa voasoratra ao amin'ny GTK2o3 aho. Ny tena marina dia tsy manana fialonana amin'ny lehibe aho, omen'izy ireo ahy ny programa ilaiko, ataoko, miaraka amin'ny E17, ny tontolo tsara indrindra nananako, haingana sy tena azo alamina. Ratsy loatra izany avela. Andramo, marina fa tena tsy mitovy amin'ny voalohany, fa ilaina ny maka minitra vitsy hanamboarana azy.
Misaotra anao raha efa novakianao ireo hevitra rehetra ireo. 🙂
Tsy afaka miresaka betsaka momba ny E17 aho satria efa nanandrana azy tena kely dia kely .. Raha ny tena izy tsy haiko raha Desktop Environment na Windows Manager…
Nampiasa ny e17 ihany koa aho ary haingana dia haingana, na dia tsy maintsy milaza ny marina aza isika fa mbola tsy manana asa io, saingy afaka mifaninana amin'ny LXDE sy XFCE tsy misy olana. Ny tsy nahomby ahy dia ny fametrahana ny menio (tiako raha hitantana ny baiko tadiaviko) sy ny famahana ny efijery ary indraindray dia tsy mitazona izany izy ary miverina amin'ny 800 × 600 ...
Azonao atao ve ny manome hevitra bebe kokoa momba ny zavatra niainanao tamin'ny E ??? Raha vantany vao manomboka amin'ny Mageia aho dia mifindra monina amin'ny alàlan'ny fampiasana Debian sy derivatives ary hametraka E17 aho.
Lahatsoratra tena kendrena .KDE ny tsara indrindra, XFCE ny fanajana ahy.
Lahatsoratra tsara Tena tiako ny KDE noho ireo antony nolazainao ireo (indrindra ny hatsarana), saingy noho ny fomba maharary azy amin'ny fampisehoana dia farany nandao azy aho (ny fotoana farany nampiasako azy dia ny debian, izay heveriko fa ny distro milamina kokoa , fa na ny debian KDE aza lasa niafara tamin'ny mavesatra). Vao haingana aho no nanome fotoana Linux Mint indray, niaraka tamin'i Cinnamon, saingy indray, na dia tsy zavatra lehibe aza izany, ny fahaverezan'ny fampisehoana noho ny fanjifana loharano dia nahatonga ahy narary. Saingy talohan'ny nanilihako an'i Mint dia nanapa-kevitra ny hanandrana ny XFCE aho (roa taona lasa izay no nampiasako izany tao amin'ny Xubuntu, tamin'io fotoana io dia nijaly tamina bibikely tany Thunar nahantona ny solosainako aho), ary ny marina dia faly tamin'ny fampisehoana aho. ny solosainako., hazavana tena tsara sy fampisehoana lehibe. Amin'ny fahazarana (ary satria misy programa tsy manome fahafaham-po ahy amin'ny Linux na satria tsy misy safidy mitovy aminy) dia mampiasa Windows 7. foana aho, herinandro maromaro lasa izay, mampiasa Mint tsy tapaka amin'ny XFCE aho, ary miverina matetika amin'ny Windows (ho an'ny sasany filana manokana). PCManFM dia tsara, izay no ampiasaiko. Angamba ho anao ity dia hadalana: tena (ratsy) aho taloha mihaino mozika miaraka amina plugin antsoina hoe "Enhancer 0.17" izay manatsara ny feo amin'ny fomba tsara, raha misy mpilalao amin'ny Linux manohana azy na manana famenon-javatra mitovy amin'izany, afaka avy eo ny fitsidihako ny linux. Mandritra izany fotoana izany dia mihaino mozika miaraka amin'i Aimp amin'ny alàlan'ny divay aho ... Taloha lasa izay dia tsy nahatsapa ho nahazo aina sy faly ary afa-po tamin'ny fampiasana Linux aho. Faly be aho nahafantatra fa nanapa-kevitra ny XFCE i debian, fa ny fifangaroana dia hahatonga ny solosaina hatanjaka tokoa ... Hiverina amin'ny debian aho. mahafaly
Tsy afaka milaza ianao fa ny Gnome miaraka amin'ny Shell dia fampiharana ratsy lavitra azy.
Eny azonao lazaina fa ratsy io, satria ratsy io, ary miharatsy hatrany hatrany.
Angamba toa ratsy aminao izany satria namela ny foto-kevitry ny tontonana + birao misy sary masina + lisitry ny varotra nefa ho ahy dia fandrosoana izany, raha vao nanandrana niara-niasa taminy aho dia azonao ny anton'ny zavatra.
Endri-javatra tsy dia miha kely + tsy azo ovaina + mavesatra kokoa + tsy azo ampiasaina sy tsy azo idirana = Ratsy
TPT !! Ary tsy te-hitsikera be loatra an'i Gnome aho, saingy marina izany, tsy azoko ny antony mahatonga azy io tsy dia azo ovaina loatra? ary avy eo dia mila mampiasa rindranasa sy fanitarana tsy ofisialy isika, izay efa tokony ampidirina amin'ny alàlan'ny default ...
Miala tsiny Gnome 3, raha anisan'ireo 4 ratsy indrindra ianao !! Ary ny tsy fantatro momba ny XFCE ...
Fanamarihana tena tsara dia ampiasaiko ny GNOME-Shell ao amin'ny Fedora 17 Tsy dia manana loharano 1 GB RAM sy mpikirakira Pentium 4 aho fa na dia tena mandeha tsara aza izy io: D. Manova ny lohahevitra, fantatrao ve fa hisy ny andro iray ho an'ny developer EFL any Barcelona Spain? http://www.enlightenment.org/p.php?p=news/show&news_id=49 Amin'ny 5 Novambra izao, toa ireo izay manam-pahazavana no efa mametraka ny fanamarinana bateria amin'ny tondrozotra izay manondro fa efa miasa amin'ny Enlightenment 18 izy ireo http://trac.enlightenment.org/e/roadmap Manantena aho fa handray ny famoahana izany ho vaovao izy ireo.
XFCE RULLZZZ, ny lazaiko dia ny nandalo azy rehetra, mahagaga izany nefa mihinana loharano ary ho ahy fa tsy manana ilay kahie mifandray amin'ny herinaratra foana aho, tena ilaina tokoa ny fiainana bateria, ankehitriny miaraka amin'i xfce + debian dia maharitra 5:30, miaraka amin'ny KDE + Arch dia naharitra 2:40, nefa tsy isalasalana fa tsara tarehy sy azo alamina tsara ny KDE, ankehitriny XFCE dia mampiala voly satria tsy maintsy manana fotoana malalaka tsara ianao handaoana azy araka ny itiavanao azy, elav toy ny lahatsoratra tsara dia tsara foana ary tsara ny bilaogy saingy misy zavatra tsy tiako hitako fa ny tontonana mety dia lehibe tokoa na farafaharatsiny farafaharatsiny amin'ny efijery kely dia toa goavambe hehehe, arahaba daholo ary misaotra anao miasa !!
Raha fantatrao fa farafaharatsiny ao amin'ny KDE miaraka amin'i Debian, dia tsikaritro fa ny fihinanana bateria dia ambony kokoa noho ny Xfce amin'ny Debian 😕 Tsy haiko, mety ho hevitro ireo 😀
Ny fanjifana dia tokony ho avo kokoa rehefa mihinana loharanom-bola bebe kokoa, farafaharatsiny ho ahy ao amin'ny arch kde dia voatifitra 400 mb ny fanjifana kojakoja aho, izany hoe tsy misy mandeha, ary maharitra 2 ora sy sasany ny bateria, izao aho mbola tsy nanandrana ny KDE tamin'ny debian, ho hitako raha hiasa amin'ny faran'ny herinandro aho ary holazaiko anao avy eo ny fahasalamako amin'ny ekipako, arahabaina Ariki
Eny ary, tiako ihany koa ny KDE tsy mandeha tsara miaraka amin'i Debian, fa amin'izao fotoana izao dia mampiasa KDE miaraka amin'i Mageia aho ary mahavita zavatra tsara !!
Salama, lahatsoratra tsara. Ny KDE dia birao iray feno sy feno, na dia tsy hitako mihintsy aza ilay izy ary miadana kokoa ny manokatra rindranasa noho ny tontolo hafa ary satria be dia be ny safidy ary na aiza na aiza no mahatonga ahy hanina. XFCE dia birao tsara fa tsy manana fialan-tsiny amin'ny famenoana azy io hatramin'ny ela be izay dia nijanona tsy ny birao maivana intsony izy, tsy nahomby tamin'ny Thunar, miaraka amin'ny hitsin-dàlan'ny keyboard sy ny lakilen'ny bokotra ary ny safidy hafa manokana, gnome dia tsy mavesatra loatra, amiko Manomboka amiko hatramin'ny latsaky ny 300 MB ary na dia fiovana tanteraka aza ny tontolon'ny tontolon'ny birao (lazaiko fa io no tontolo misy ny birao tokana) dia nahitam-bokatra kokoa tamin'ny fampiasana ny klavier. LXDE no birao maivana tokony hisy, mamela ny tsy fahampian'ny mpitantana herinaratra sy ny sisa aho satria tokony ho an'ny PC taloha kokoa.
Inona izany hoe manana solosaina tsara izany, tsy marina @Elav, izao apetrakao amin'ny toerana sahaza azy avy ny tontolon'ny birao, toa hafahafa tamiko ny fahitanao ny fahagagana fotsiny momba ny XFCE (izay mendrika, na tsy ampy kokoa), vitsivitsy. "ozona" ho an'ny Gnome 3 (manaiky ihany koa) ary saika hadino ny KDE.
ary ho an'ny fananana ram ramita 4 gigabytes mahafinaritra dia mampiasa KDE indray ianao, mandray anao amin'ny fomba ofisialy amin'ny klioban'ny KDE aho !!!!
Hahahaha, raha ny marina, manana KDE ao amin'ny Netbook koa aho, miaraka amin'ny Xfce mazava ho azy ...
Ny tatitra elav dia tsara dia tsara, tamin'ny fotoana fohy nananako tao amin'ny linux dia nanandrana ireo tontolo efatra aho, ary ny tena tiako indrindra dia ny xfce, tiako izany satria azoko atao ny manamboatra azy araka ny itiavako azy ary tsy mandany be toy ny kde , ny hany tsy tiako daholo dia ny gnome.
KDE ny birao semantika.
XFCE hatramin'ny fahafatesana, izany no ilaiko rehetra, tsy misy intsony, tsy latsaka.
patz dia hoy izy:
Tsy mampiasa feso, nautilus na thunar aho. terminal tsara sy voila. Tsy mila kate na gedit, vim ary voila aho. ho an'ny zavatra hafa rehetra ilaiko dia ny manova ny habeny, mamindra ny varavarankely, mifindra eo anelanelan'ny varavarankely ary afaka manao azy amin'ny alàlan'ny fitendry fotsiny (google chrome + vimium hitety) tena te-hamokatra ve ianao? misy tontolo iainana maro, tsara kokoa noho ireo voalaza mba hanaovana izany. Ny fitomboan'ny famokarana dia manao veloma ny totozy ary afaka manao ny zava-drehetra, na saika ny zava-drehetra amin'ny klavier, ny zava-dehibe dia ny azo amboarina ary afaka mifidy izay lakile hiasa 😉
Mamaly an'i patz
Eny, heveriko fa ny milaza fa ny desktop toy izany dia mamokatra kokoa dia tsy mitombina satria miankina amin'ny mpampiasa ny famokarana, fa Elav kosa mamokatra bebe kokoa amin'ny KDE, ny biraonao, izaho miaraka amin'i Gnome Shell, iray hafa misy lxde sns.
Heveriko fa marina izany.
ULVER dia hoy izy:
Ny distro tsara indrindra miaraka amin'ny LXDE dia KNOPPIX .. satria fotsiny ianao mahazaka ny rindranasa KDE sy Gnome mihazakazaka amin'ny fahaizany feno. Ataoko ao anaty ondrilahy kely p4 2.26 sy 700mb
Windows fotsiny izao no ampiasaiko, fa manantena ny Mageia 3 miaraka amin'ny KDE 4.9 aho ary hiverina amin'ny linux toy ny tamin'ny andro taloha.
Valiny amin'i ULVER
Tsy maintsy hiandry ela izy 😉
Roberto Gea dia hoy izy:
Ary aiza ireo mpitantana varavarankely, boaty misokatra, flxbox, na mpitantana ny tile toy ny dwm.
Tsy noho izy ireo manana safidy vitsy kokoa amin'ny alàlan'ny default (matetika izy ireo dia azo ovaina kokoa noho ny DE lehibe), midika izany fa tsy dia matanjaka izy ireo, na mamokatra araka ny iantsoanao ny elav, ary ireo dia tsy ampiasaina amin'ny PC misy loharano vitsy fotsiny.
Valiny tamin'i Roberto Gea
Ny lahatsoratra dia miresaka momba ny tontolon'ny Desktop, fa tsy Windows Manager. Marina fa miaraka amin'ny OpenBox, Fluxbox ... sns dia afaka manana Birao mahafinaritra ianao, saingy tsy tontolon'ny Desktop izany .. 😀
Miditra amin'ny birao ny fahazavana ??? Ary fanontaniana iray hafa ihany koa, ny birao hafa inona no azo zahana? Mahaliana ny mahafantatra kely kokoa momba an'ity lohahevitra ity, hanomezana fotoana ireo izay tsy voatonona firy, sa tsy izany?
Izaho dia manana fisalasalana mitovy aminao. Raha io voalaza ho antsoina hoe Desktop Environment io, ireo 4 sy RazorQT ireo ihany no fantatro, tsy haiko raha misy any.
Ankehitriny, heveriko fa ny KDE dia mitovy na maivana kokoa noho i Gnome.
Ankoatry ny maha-izy azy manokana sy tsara tarehy kokoa 😀 hahahaha.
Lahatsoratra tsara elav, fa tsy hiombon-kevitra kely momba ny LXDE aho.
Ho ahy LXDE dia tena mora ny manamboatra tsy toy ny amin'ny tontolo hafa. Toy ny amin'ny zava-drehetra dia mora toy ny famakiana ny antontan-taratasy na amin'ny fikarohana Internet izany.
Ireo mahalala ahy dia mahalala fa mampiasa LXDE aho, afa-tsy ny mampiasa Fluxbox (izay efa niarahako nandritra ny 4 taona) fa tsy Openbox sy Thunar fa tsy OpenBox sy Compton mba hanisy stationery sasany.
Fa maninona no ampiasaiko? Manao izay ilaiko fotsiny izy io, tsy mila mandany RAM sy CPU be dia be (mandany RAM 2Mb fotsiny i Compton).
Ary ho hitan'ny sasany fa sady ratsy tarehy ny LXDE na ny Fluxbox dia avelako ianao haka pikantsary 2 amin'ny birao misy anao:
Boaty flux: http://fav.me/d3iilrh
israelem dia hoy izy:
Tsara, nandritra ny taona vitsivitsy dia mpampiasa Linux 100% aho. Voalohany noho ny antony akademika, ny informatika ary satria tiako be izany. Ankehitriny, tiako ny zavatra tsotra ary tsy manana olana amin'ny fanandramana aho mandra-pahitako zavatra tiako.
Nanomboka tamin'ny Ubuntu + Gnome aho mandra-pahatongan'ny nifindran'izy ireo tao amin'ny Unity. Taty aoriana dia zatra an'ity tontolo ity aho. Nanandrana an'i Kanelina sy MATE ihany koa aho. Amin'ny ankapobeny, aorian'ny fitsapana maro dia miaiky aho fa aleoko ny MATE na kanelina, miankina amin'ny hoe mila zavatra tsotra be aho na zavatra maro loko.
Milamina ihany koa ny firaisan-kina, fa satria efa reraky ny fametrahana indray isaky ny 6 volana dia miaraka amin'i LMDE + MATE aho.
Ahoana ny hevitrao momba ireo tontolo 3 ireo? Indrindra ny MATE izay fork an'ny Gnome2 sy Cinnamon izay fork Gnome3. Izany ve no lalana tokony narahin'i Gnome? Sa farafaharatsiny namela ny varavarana hisokatra ho azy?
Valiny ho an'ny Israelem
Raha manontany ahy ianao dia heveriko fa ny MATE dia tetikasa iray na dia tsara ho an'ny mpampiasa maro aza izany dia hadino tsikelikely, satria hohanin'ny obsolescence izany. Raha ny tokony ho izy, ny Gnome 3 dia tokony hohazavaina kokoa amin'ny maody Klasika na FallBack.
Misy (s) hafa izay heveriko fa hanana izany vintana izany koa.
Ny birao tsara indrindra, tsy isalasalana fa ilay ampiasaiko. Maivana, ahazoana aina ary azo ovaina tokoa 😉 http://i.imgur.com/tN9Gx.jpg
Hahaha, ilay azo ovaina be no miahiahy ahy ..
TPT !! Mazava !! Fa mieritreritra ihany koa aho fa tsy afaka manampy gadget fotsiny ianao ary ny olana dia rehefa misy miditra "ny biraonao" ka mamindra ny toerana misy azy!
louis-san dia hoy izy:
Gnome Shell, satria izy ihany no tontolon'ny birao (tsy manilika ny Unity) izay nampiasako.
* Mandrakizay Gnome Shell *
Valiny tamin'i Louis-san
Mijery KDEro be dia be aho tato ho ato, hehehe.
Ho ahy ny tena mety indrindra dia ny XFCE na dia isan'andro aza dia tiako kokoa ny openBox
Heveriko fa misy satria tsy tian'ny tetikasa Gnome (ajanona na tsara na tsia), ary maro amin'ireo zavatra tadiavintsika eo amin'ny birao no mombamomba azy, ny fanaingoana ary ny fitenenana ... zavatra izay omen'ny KDE tsara .. Ary amin'ny ny tranga tontolo iainana izay tsikaritro teboka malemy, rehefa tsy maintsy manitsy rakitra fisie mivantana ianao ary mampiasa rindranasa sy / na fanitarana fanampiny, mpampiasa izay tsy tia "tinker", mpampiasa farany maro fa ny PC-n'izy ireo dia ho an'ny asa fotsiny. matahotra, miasa, ary ny fialamboly ary miverina amin'ny Windows na mitady fomba hafa. Avelao aho hanazava, variana amin'ny "solafaka" amin'ny solosainako aho, saingy maro ny olona mahita ny asako sy ny zavatra rehetra ataoko ary matahotra azy. Ho an'ny tsiriko, ny birao tsara indrindra dia ilay ahafahan'ny mpampiasa farany manamboatra ny tontolo iainana amin'ny fomba mora sy tsara indrindra, ankoatry ny fanamorana ny asany (ary tsy afangaro amin'ny safidy maro, maso KDE)
Douggarcia dia hoy izy:
Salama daholo, nampiasa fizarana maromaro tao amin'ny PC aho nandritra ny fotoana fohy ary mizara izay lazain'ny sasany, tampoka ny tontolo MATE, misy ny mieritreritra fa mety ho lany andro io nefa raha mijery ianao fa ampiasaina amin'ny distro semi famotsorana distro toa ny LMDE Mety ho io no fanosehana ilain'ny tetikasa, ary azo lazaina fa ity no iray amin'ireo birao tsara indrindra ho an'ireo olona mampiasa ny Gnu / Linux voalohany, na dia tena tiako aza ny kanelina misy fanitarana azonao atao ny manome azy io somary amin'ny mintmenu izay ampiasaina amin'ny MATE, ny shell Gnome dia nisy fiovana maro izay antenaiko fa amin'ny fotoana maharitra dia mety ho tsara na dia mbola iray amin'ireo tiako ihany koa aza izany, saingy hoy i Elav dia resaka tsiro sy filàna izany.
Valiny tamin'i DougGarcia
Kde no mbola birao tsara indrindra amin'ny resaka kalitao, saingy mazava ho azy fa raha mijanona miaraka amin'ny Pentium IV mandrakizay isika dia ara-dalàna raha mandeha miadana isika ... 🙂
Inti Alonso dia hoy izy:
Raha miresaka momba ny KDE aho, (izay heveriko fa ambany loatra ny fijerin'ny vondrom-piarahamonina Linux) dia mizara ny fizotr'i Malcer amin'ny sary ho an'ny CHakara manaraka (hivoaka amin'ity herinandro ity na amin'ny herinandro ambony):
Hatsaran-tarehy, sa tsy izany?
Valiny tamin'i Inti Alonso
Izay raha ny hevitro !! KDM sy KSplash no tena tiako indrindra tamin'ny fahitana, hiandry kinova ho an'i Megeia aho !!
trondro dia hoy izy:
Mampiasa LXDE aho ary tsy manova azy na amin'inona na amin'inona, azo ovaina izany, mety ho an'ny vao manomboka dia manahirana amin'ny voalohany fa rehefa vita izany tamin'ny voalohany dia mofomamy ary ny tena tiako indrindra amin'ny birao kely dia ny mamela ny fandaharanay hiasa amin'ny tsiranoka kokoa na inona na inona milina tsara anananao. XFCE dia toa birao tena tsara nefa mitandrema, tsy dia maivana loatra izany raha manana milina tsy manana loharanom-pahalalana kely ianao, heveriko fa tsy io no safidy tsara indrindra. Nampiasa ICEWM ihany koa aho ary hitako fa birao maivana be dia be izy io, azo alamina tsara ary tena tsara, na dia mbola mila mandany fotoana bebe kokoa amin'izany aza aho.
Mamaly an'i cogan
Manaiky aho fa ny LXDE dia miaraka amin'ny zavatra Gnome, ary ankoatr'izay mba hahavonona azy dia mila fahalalana mialoha ianao hampifanarahana azy.
ho ahy ny KDE tsara indrindra dia ny andiany 3.5 ..
Tsy tiako ny kinova anio .. raha ny marina dia efa nametraka 4.5 aho dia mieritreritra fa tsy tiako. miadana kokoa ...
Moa ve ilay kinova 4.5 tsy dia tsara holazaina, izany hoe, tsy nolefaka izy io ... 4.8 na 4.9 dia zavatra hafa.
Eny, tohizako ny 4.3 !!! ary miasa aho tsy misy olana na tsy ampoizina, mandeha ny zava-drehetra ary mandany ahy kely, toy ny Gnome 2.8
Mpampiasa aho: slaxkware 12.2 KDE 3.5 .. Dingana sy maharitra ...
FA HANDEHA INDRINDRA AMIN'NY UBUNTU ANIE IZAO TSY TIA ITY ...
Nampiasa ny Gnome nandritra ny fotoana ela aho ... na i Gnome3 fa ilay kinova vaovao dia tsy naharesy lahatra velively ...
Niezaka ny KDE aho ary niova ny zava-drehetra! Azo antoka fa io no tontolon'ny birao tsara indrindra… mahatsiaro mamokatra sy feno… ianao dia tsy tavela miaraka amin'izay fahatsapana "zavatra tsy hita" izay.
Efa nanandrana azy tao amin'ny Chakra, Sabayon, OpenSuse ary amin'ny Kubuntu aho izao. Ny disto rehetra dia namboarina tsara niaraka tamin'ny KDE.
neomyth dia hoy izy:
Ny KDE no tsara indrindra tsy azoko satria izy ireo dia tsy manana izany ho toy ny birao default amin'ny ankamaroan'ny fizarana, raha mahomby izy ireo ary azo ovaina.
Toa hitako fa io indrindra no olana: arakaraka ny habetsaky ny safidy omenao ny olona no mahabe ny alahelo omena azy ireo (matotra!) Izany no mahatonga ny ankamaroan'ny distros misafidy tontolo tsotra sy voafetra izay mora ianarana sy ampiasaina.
Misy ihany koa ny zava-misy: androany ny ankamaroan'ny mpampiasa birao dia tsy mihady amin'ny rafitr'izy ireo, mampiasa izay nomena azy ireo sy ny fomba anomezana azy izy ireo - izany no iray amin'ireo singa mahomby amin'ny paikadin'i Apple amin'ny vokatra vokariny?
Ny KDE SC dia hitohy ho tontolon'ny safidy ho an'ny mpampiasa mandroso sasany ...
Bryant dia hoy izy:
Mitranga izany fa tsy isika rehetra no te-handanjalanja, ny KDE dia manana fomba maro hanamboarana azy ho anao. Ankoatr'izay dia mila loharano fanampiny.
Farafaharatsiny mba afa-po amin'ny LXDE aho na amin'ny OpenBox aza, tiako foana ny hafainganana fa tsy ny famolavolana.
Valiny tamin'i Bryant
Fitsipika KDE !!
ManuelVLC dia hoy izy:
Hatramin'ny naha-tsy an'i Gnome 2 dia mihazona ny Ubuntu 11.04 aho ... Ary mitady "zavatra" mety amiko sy amin'ny ankohonako sisa ... Ary heveriko fa hifikitra amin'i Xfce aho. Thunar? Eny, mampiasa ny Mamatonalina Komandy na TotalCommander eo ambanin'ny divay aho (azafady, TSY MISY mpitantana rakitra efa nanandramako tao amin'ny linux hanakaiky, mainka fa tsy haharesy azy io). Horonan-tsary? VLC, mazava ho azy. Audio? Androany aho dia nahita Qmmp, izay tsy inona fa ny wininux linux, afaka mampiasa hoditra 2.x aza izy io. Xfce ao amin'ny Linux Mint dia tena tsara, satria manova ny menio fampiharana "normal" ho an'ny mintMenu feno kokoa.
Amin'izay aho manana rafitra iray izay tsy dia be loatra (PC miaraka amin'ny taona vitsivitsy, efa manana 120Gb HD), mandany kely kokoa ary tsy dia manelingelina firy. Ny olako amin'ny KDE 4 na Gnome3 dia amin'ny ankapobeny fa tsy manam-potoana intsony "hianarako" misy ny zavatra aho: na intuitive ny tontolo iainana, na tsy mety amiko. Ok, misy zavatra tsy maintsy atao amin'ny alàlan'ny terminal (tsy mimenomenona aho, alika taloha aho ary nanomboka tamin'ny solosaina talohan'ny nivarotan'ny IBM ny PC voalohany ...), fa raha mila mandany 4 minitra aho tadidio izay tokony hanovako ny fiavian'ilay birao, tsy hitako izay misy ny famokarana (ohatra izany….)
Na izany na tsy izany, rehefa afaka volana vitsivitsy dia nanandrana (ary nariako) ny LXDE (tsy tian'ny ankohonany izany), Gnome3 / Unity / Shell (raha ny teboka matanjaka an'ny linux dia afaka miasa araka izay tianao ianao, maninona no Gnome tsy vitako? Mivoaka ...), KDe (mavesatra ary mampisavoritaka, naharitra antsasak'adiny mahery aho vao namono io zavatra io tamin'ny Plasma na izay nantsoina, ary tamin'ny netBook dia tsy maintsy nandeha tany amin'ny Internet aho. hahafantatra ny fomba niovany ho «mahazatra Ary ny an'ny fampiharana ... tsara, mivoaka)
Raha fintinina: manana Xfce sy mint miaraka amin'ny kanelina (linuxMint + Cinnamon) aho. Eo aho. Raha ny marina dia miaraka amin'ny liveUSB delinuxMint Xfce aho. 🙂
Valiny amin'i ManuelVLC
Mpanara-dàlana feno divay? Hahaha, mampatahotra tokoa. Tsy nandre momba ny feso feso ianao, sa tsy izany? ary i Krusader?
Emiliano dia hoy izy:
I lxde dia tsy birao ratsy, io no haingana indrindra fantatro ary miaraka amina fotoana fohy dia azonao atao tsara tarehy ... vato manohana ny tontolo tokana mety tsara amiko ao amin'ny pc taloha !!! haha
Valiny tamin'i Emiliano
Nanandrana ny AwesomeWM sa dwm ve ianao?
tahirin-tsiry dia hoy izy:
Misaotra anao nanoratra ity lahatsoratra ity sy ho an'izay rehetra nanana ny heviny. Tena mianatra ianao.
Niaraka tamin'ny Linux nandritra ny 2 taona aho ary nampiasa fizarana maro miaraka amin'ny kinova sy tontolo iainana samihafa.
Nihaona tamin'ny ubnce Jaunty Jackalope gnome aho, tena tiako izy ary nanambady ubuntu aho. fa rehefa nivoaka niaraka tamin'ny tontolon'ny firaisankina izy dia nitsoaka toy ny nanenjika ahy tamin'ny bala izy ireo. Nandehandeha namaky distro isan-karazany aho nefa tsy nahita fifandraisana matotra, fa miverina ao amin'ny kahie ny fitiavana.
Ny ambiny dia tsara fa aleoko ity satria mandeha amin'ny fomba tiako io.
Mamaly an'i afix
Misaotra noho ny fampahalalana satria isaky ny te-hisintona birao ankavanana xfse.gnome aho… ..blablabla, ary tsy azoko ny bokotra iray, ny marina dia tena manabe. Mahagaga ny tontolon'ny rindrambaiko
Aleoko ny LXDE, maivana izy io, tena haingana be, mampiseho ny zavatra ilainao rehetra ary azo amboarina tsara tarehy amin'ny filalaovana ny akaikin'ny openbox, tena tsara tsy misy fisalasalana.
Mamaly an'i gustavo martínez
Xocoyotzin dia hoy izy:
Raha ny fahitako azy dia efa niasa hatramin'ny taona 2000 aho tamin'ny Linux, mpampiasa farany fotsiny aho ary tsy dia mahazo zavatra firy amin'ny fandefasana, ilay lohahevitra resahina momba ny filàna sy ny tsiro hijanonako amin'ny KDE, Manana netbook Miaraka amin'i kde sy lalitra aho, efa nanandrana gnome klasika, 3, firaisankina, xfce ary tena tsara fa tsy dia mahafinaritra loatra ny miasa amin'ny netbook miaraka amin'ireo tontolo iainana ireo, angamba gnome 2 somary mifanaraka nefa mandinika izay nolazain'izy ireo etsy ambony tena marina izy io indraindray mila bebe kokoa amin'ny fandefasana fa tsy amin'ny fiasa noho izany dia mijanona miaraka amin'ny kde aho, eo amin'ny birao misy ahy dia manana linux mint 14 miaraka amin'ny kanelina aho ary mankany amin'ny 100 dia tiako be izany, marina tokoa rehefa zatra ny tontolo iray ianao. lafo kely ny mampifanaraka amin'ny iray hafa, rehefa nampiasa vola kely aho ny gnome2 KDE, heveriko fa ny fidiran'ny rano dia fampidirana ny firaisankina ao Ubuntu satria avy eo nifindra monina tany amin'ny tontolo hafa ireo mpampiasa, heveriko ihany koa fa maro no matahotra kely KDE, lazain'izy ireo fa tsara izany saingy hafa kely ihany, saingy na izany aza rehefa miditra izy ireo dia avela ho tsara amin'ny tsiro ... Ny safidiko dia KDE: D ...
Valiny tamin'i Xocoyotzin
Mampiasa LXDE aho dia nanandrana azy rehetra aho ary satria mitady ny hafainganam-pandeha aho dia mazava ho azy fa mifidy an'io, raha mazava ho azy fa manomboka mijery birao tsara tarehy aho ary mankalaza ny masoko dia misafidy ny KDE, fa ny hafainganam-pandehan'izy roa ireo dia tsy ampitahaina.
Ny KDE tsy misy vokany na oviana na oviana ary amin'ny HW mendrika dia _practically_ haingana tahaka ny LXDE - ny milliseconds ny fahasamihafana misy eo anelanelan'ny birao iray sy ny iray hafa dia omena ambonin'izy rehetra ao amin'ireo rindranasa misy isaky ny birao izay mazava ho azy fa tsy azonao atao ny mampitaha ny fahombiazan'ny rindranasa. natao ho an'ny KDE miaraka amin'ireo natao ho an'ny LXDE.
Nifindra tany amin'ny KDE aho satria tsy mahazo aina ny gnome3, matetika aho manokatra rakitra an-tsoratra (doc, txt) isan-karazany sy takelaka. Saingy nampifangaro azy ireo izany tontolo izany ary napetrako tamin'ny toerana tiako izy ireo. Ary miaraka amin'ny Dolphin dia miditra amin'ny folder FTP mihitsy aho, tsy mila filezilla intsony ary miaraka amin'i Kate dia manokatra sy mitahiry fanovana amin'ny tranokala aho raha tsy mampiasa mpanjifa FTP (afa-tsy Dolphin)
Ho ahy ny MATE tsara indrindra, miaraka amin'ny Linux Mint, pass iray.
Leonardo Daniel Velasquez Fuentes dia hoy izy:
Salama, 3 volana no nijanonako tao amin'ny Linux ary nizaha fizarana sy fizarana isan-karazany mandalo amin'ny Ubuntu 13.04, 13.10, xubuntu, kanelina mint Linux ary xfce, crunshbag, gnome fedora ary xfce, bodhi linux, manjaro xfce, kanelina ary openbox, tsara tarehy OS tsotra
ary azoko lazaina amin'ny xfce fa ny tena tsara indrindra dia ilay avy any Manjaro ary tsy nijanona niaraka tamin'io aho, satria manambady tanteraka amin'ny sudo apt-get install aho, hahaha
mint xfce tsy ratsy tarehy koa, tsy dia sarotra atao
Valiny tamin'i Leonardo Daniel Velazquez Fuentes
Aleoko ny LXDE, satria afaka manatanteraka ireo hetsika izay hataonao amin'ny birao hafa ianao fa amin'ny hafainganam-pandeha tsy manam-paharoa! Haingam-pandeha tokoa izy io na dia mihazakazaka fampiharana mavesatra toa ny fanakona-masoandro aza, ny gimp na ireo mpitety ankehitriny misy tabilao misokatra maro.
Na dia marina aza fa manana ny zava-drehetra eo an-tànana ny KDE ary manamora ny asa, ny fanjifana be ny loharanon-karena dia mahatonga azy ho mavesatra sy miadana ho an'ny fandidiana maromaro, vao mainka aza raha toa ka efa an-taonany ny kapila mafy ary very ny revolisiona. Na dia marina aza fa ny LXDE dia atolotra ho an'ireo mpampiasa manana traikefa kely kokoa satria indraindray misy ny fandidiana izay tsy manana interface graphique amin'ny alàlan'ny toerana misy anao ary tsy maintsy manantona ny terminal mampatahotra ianao, toy izany ny tratran'ny hitsin-dàlana fitendry (misy Obkey fa tsy ampidirina bao).
Heveriko fa ny hafainganam-pandehan'ny LXDE (haingana kokoa noho ny Windows XP) dia manonitra ireo lesoka kely amin'ny fampiasa izay ananany ary raha teboka matanjaka dia manomboka haingana be noho ny birao hafa izy ary miasa tsara daholo ny rindranasa gnome rehetra. Andao, resaka fampifanarahana azy fotsiny io amin'ny fanazaran-tena kely ary ny fampiasana isan'andro dia mofomamy; hanadino ny fihenan-tsasatra rehefa manokatra varavarankely, nianjera noho ny tsy fahatsiarovan-tena, fanodinana indexing be loatra, ankoatry ny hafa. Izay vilany rehetra dia ampy 🙂
jors dia hoy izy:
kde azo namboarina hametraka azy mitovy amin'ny desktops hafa
Mamaly an'i jors
Gnome2 dia (amiko) ny tontolon'ny birao tsara indrindra nandramako. Fampisehoana tsotra sy kanto maro no nahatonga ny mpitantana meksikana ho zavatra iray hafa ao amin'ny lisitry ny tontolo tena tianao. Izay no ilazako hoe ERA.
Rehefa nivoaka i Gnome3 dia nanaitra ahy ny fahitako; Ahoana no ahafahana manao izany mandritra ny taona maro amin'ny fampiasana ny bara roa, ny iray ho an'ny fampiharana mavitrika dia manjavona ary tsy maintsy mifindra amin'ny varavarankely iray mankany amin'ny iray hafa amin'ny fomba mahatsikaiky toy izany aho, dia ny fanindriana ny fitambarana manan-danja na ny fanokafana ny menio fangatahana voatahy. ? Ary ny an'ny sarimiaina, mamarana ny toe-javatra.
Na izany na tsy izany, heveriko fa Gnome3 dia fiasco tanteraka ary manana fikasana mazava hampifanaraka ny Unity. Ataoko fa na ity farany aza dia nidaroka azy. Tsy fantatro.
Efa ela aho no nanintona an'i LXDE. Ny KDE dia natao ho an'ireo izay te hampanjifa azy. Tsy izaho, raha ny fanazavana. Ny tsiro dia tsiro.
Carlos Bolanos dia hoy izy:
Amin'ireo linux rehetra dia mijanona miaraka amin'ny Linuxmint KDE aho sy ireo izay efa nampiasako ny Fedora, suse, ubuntu, mandriva cinemon sns ary mila miady amin'ny linuxmint17 mora foana aho mametraka ny programa multimedia rehetra, ny internet, ny sary an'ny birao ny screensaver, ny wallpaper sns
Valiny tamin'i Carlos Bolaños
Roman Alejandro Lazcano Hdez. dia hoy izy:
Manantena aho fa salama tsara ianao rehefa mamaky an'ity, hoy aho aminao, nividy fitaovana mitam-piadiana izay natolotra ahy tamin'ny windows 7, —- amd athlon IIx2250 (64 bit) processeur amin'ny 3000 mhz, reny targ asrok n68-vs3, ddr3- a1 2048mb / 400mhz, - izay jiolahin-tsambo iray, noho ny olan'ny toe-karena ary nitady fomba hafa hanandrana ny ubuntu, linuxmint, ary amin'izao fotoana izao ny Fedora -live, desktop-86-64-20-1. iso– izay nanome olana ahy koa toa ny gaga. Ao amin'ny Ubuntu dia tsy afaka nanao audio mihitsy aho, fanavaozana roa ny Fedora no navoaka saingy tsy niasa izy ireo, satria tsy mamela ahy hanao na inona na inona aorian'ny fidirako amin'ny birao satria tsy mihetsika akory ny kursor dia miafara amin'ny fanaovana ny efijery na ny sary no simba. ary gaga. Androany dia te-hametraka windows indray aho ary tsy afaka, nanandrana nametraka indray ubuntu aho nefa tsy, tsy mamaky ireo kapila fametrahana, ao anaty lahatsoratra novakiako dia milaza fa ity kinovan'ny Fedora ity dia manao izay ataon'ny Windows 8, izay dia ny manidy ny fomba tsy ahafahana mametraka rafitra fiasa hafa .———– ahoana no hataoko hanatsarana ny art fedora na hahafahako mametraka distro hafa. mba ampio.
Valiny tamin'i Román Alejandro Lazcano Hdez.
jordanvrock dia hoy izy:
Nanampy ahy be dia be ity bilaogy ity hisafidy interface tsara ... mampiseho izany fa izay nanoratra azy dia manana ny fahitany izay lazainy sy izay tsy tokony horesahiny momba ny fanajako \_ -_- /
Mamaly an'i JordanVRock
Profesora Yeow dia hoy izy:
Tsy isalasalana fa ny XFCE 4 dia manidina na aiza na aiza, ary ny fahafahan'ny fisehoana ananany dia avo lavitra noho i Gnome aza. Saingy hatsaran-tarehy i KDE4, mifanohitra amin'ny hoe somary voafetra amin'ny fitaovana taloha izy io fa raha betsaka ny masinina, dia efa mahafinaritra ny KDE5 (izay manodidina ny kinova voalohany). Raha tsy misy isalasalana, raha manana ondrilahy mihoatra ny 2Gb KDE4 ianao (ary avy eo rehefa tonga ny faha-5) dia io no tsara indrindra azonao safidiana. Mandritra izany fotoana izany, XFCE dia mbola safidy tsara.
Valiny ho an'ny Profesora Yeow
Demo Kaos dia hoy izy:
Mandra-pahatongan'ny MATE namindra azy ireo: XFCE LXDE
Valio amin'i Demian Kaos
Alexander Tor Mar dia hoy izy:
Mpankafy KDE aho, nampiasa gnome imbetsaka - tsy tiako izany - manelingelina ahy izany, nahavita nametraka LXDE tamina milina hafahafa aho, manandrana XFCE aho ary tiako kokoa noho ny LXDE ...
Valiny tamin'i Alejandro Tor Mar
Antonio Gonzalez placeholder image dia hoy izy:
Ry namako Linux
Izaho dia mpahay siansa, teknisianina ary mpandahatra programa, mampiasa windows aho ao amin'ny birao ho an'ny programa fitantanam-bola ary ao an-trano aho manana solosaina finday Windows sy Linux, tablette ary finday android.
Nampiasa distros maromaro aho ary nifikitra tamin'i Debian, noho ny fahamendrehany, isan'ny rakitra ary filozofia.
Nampiasa ny gnome 2 aho noho ny fahatsorany sy ny fahatsorany, saingy satria miasa amin'ny rakitra be dia be aho dia sosotra tamin'ilay hoe nautilus (toy ny thunar) mamafa ireo rakitra / lahatahiry nefa tsy mangataka fanamafisana, izay azo kilemaina / alefa amin'ny Windows Explorer, Dolphin ary PCManFM
Nanontaniako ny vondrona gnome momba an'io endri-javatra io ary nilaza izy ireo fa izany no endrika ary tsy hanova izany izy ireo.
Amin'ny gnome dia azoko atao ny manokatra rakitra avy amin'ny PC hafa amin'ny tamba-jotra eo an-toerana, izay tsy mandeha amin'ny KDE / LXDE miaraka amin'ny Dolphin / PCManFM, dia voatery nandika ilay rakitra tamin'ny kapila teo an-toerana aho mba hahafahako mampiasa azy.
Na izany aza, amin'ny distros toy ny knoppix, PCLinuxOS (PCLOS) ary na amin'ny cd-debian an'i debian aza raha azo atao, fa rehefa apetrakao ao amin'ny pc-ko dia samy tsy misy (meta package) iray ary tsirairay (amin'ny aptitude na synaptic) no tsy nahomby. Izaho aza dia nametraka sy nanamboatra serivisy tambajotra marobe (KIO, SMB, sns.).
Niezaka ny hampiasa Dolphin sy PCManFam amin'ny gnome aho ary maro ny zavatra tavela nefa tsy afaka nampiditra.
Avy amin'ny gnome3 dia tsy dia mamporisika ahy ny interface na ny fangatahana loharanom-pahalalana horonantsary, saingy azo ampiasaina izany, afaka manokatra rakitra amin'ny tambajotra eo an-toerana izy nefa mbola tsy mangataka fanamafisana rehefa mamafa / mandefa any amin'ny fako.
Ao amin'ny KDE raha mangataka fanamafisana izy fa tsy afaka manokatra rakitra amin'ny tambajotra eo an-toerana aho
xFce dia gnome tsotra, nandinika kely aho ary tsy tiako, ary mamela ahy amin'ny filàna roa
Tiako ny LXDE, saingy tsy afaka manokatra rakitra amin'ny tambajotra eo an-toerana koa aho.
Ahoana ny fomba handaminana ny PCManFM na Dolphin hahafahana misokatra / mampiasa amin'ny rakitra avy amin'ny lahatahiry zaraina amin'ny tambajotra eo an-toerana?
Ahoana ny fomba hanaovana an'i Nautilus hangataka fanamafisana rehefa mamafa ireo rakitra na lahatahiry?
Raisiko ny tontolo iainana mifanaraka amin'ireo filàna roa ireo
Izaho aza mandoa ny vahaolana na dia iray aza amin'ny zavatra ilaiko
Valiny ho an'i Antonio Gonzalez
Roberto perez dia hoy izy:
Rehefa avy niasa tamin'ny gnome 2 namakivaky ny kde 4 aho dia tsy nampientanentana ahy mihitsy ny safidy gnome 3, ny nampitahotra ahy kosa dia nanararaotra ilay fitsambikinana aho avy eo amin'ny kde hatramin'ny faha-5 ary tamin'io fotoana io dia nahasarika ahy izany, heveriko fa ny birao tonga lafatra Raha ny Deepin dia tsy vitako ny mandevona azy, tsara tarehy sy azo alamina saingy misy zavatra tsy fantatro ary miaraka amin'i Lxde sy Xfce dia toa tena ambany sy tsy misy dikany izy ireo.
Ny KDE 5 no mpandresy tokoa.
Valiny tamin'i Roberto Pérez
Dinimixis dia hoy izy:
ARY MISY !!?
Mamaly an'i Dinimixis
Taratasy fanokafana avy any Digia mankany amin'ny The Community KDE